Dhulgariir labo ruux ku dilay dalka Talyaaniga
Dhul gariir ku dhuftay dalka jasiiradda Ischia ee dalka Talyaaniga ayaa galaaftay nolosha labo dumar ah dhaawacayna 39 ruux oo kale.
Xaakim Maraykan ah oo ku sugnaa gobolka Ohio ayaa toogasho ku dilay nin rasaas ku soo furay oo dhaawac xun ugu gaystay maxkamad bannaankeed.
Barasaabka cusub ee deegaanka Garissa, Cali Bunow Qorane, ayaa sheegay in maamulkiisa uu wax ka qaban doono dhibaatooyinka la degay deegaankaas oo ay ka mid tahay biyo yarida.
Muruqmaalka dekeda Berbera ayaa waxa ay dareemayaan isbeddel ku dhacay shaqadoodii oo gaabis noqotay tan iyo intii ay sharikadda DPWorld ay la wareegtay maamulka dekeddaasi.
Maxkamadda ugu saraysa dalka Hindiya ayaa sharcidarro ku tilmaantay furitaanka degdeg ah ee saddexda dalqadood ay halka mar ku dhawaaqaan ragga Muslimka ah ee dumarka furaya.
Dowladda Shiinaha ayaa markii ugu horeysey furtey maxkamad qadka internetka ku shaqaysa oo dhagaysata dacwadaha la xiriira internetka sida ay faafisey warbaahinta dowladda Shiinaha.
Faransiiska: Nin gaari mariyay labo goobood oo basaska lagu sugo
Haweenay ayaa dhimatay ka dib markii gaari la mariyay goob basaska lagu sugo oo ku taala magaalada Marseille ee koonfurta dalka Faransiiska, sida ay booliisku sheegeen.
Markii isbitaalka la geeyey waxaa laga heley xanuun ay cayayaanka u gudbiyaan bini'aadamka oo afka qalaad lagu yiraahdo Lyme, kaasi oo marka dambe horseedi kara wadne xanuun halis ah.
Ninkii Barcelona weeraray oo Yurub oo dhan laga baadigoobayo
Baadigoobka darawalkii 13ka ruux ku dilay magaalada Barcelona toddobaadkii hore ayaa hadda lagu baahiyay qaaradda Yurub oo dhan, sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Catalan ee dalka Spain.
Markii gabadh 15 jir ah oo dalka Malaysia u dhalatay ay barta Twitter-ka ku soo qortay riyadeeda ku aaddan inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee dalkaasi raysal wasaare ka noqoto sanadkan, ayaa waxay la kulantay cambaareyn.
Iyadoo xilligan xajka ay dekadda magaalada Berbera ka dhoofayaan xoolaha ugu badan ee Soomaalida ee dibedda loo dhoofiyo, ayaa waxaa sare loo qaaday baaritaanka xoolahaasi.
Shacabka ku nool gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa inta badan ka cawda wadooyinka deegaannadaasi oo xun, isla mrkaana intooda badan aan laami la saarin tan iyo xorriyaddii.
Ciidamada lugta ee dalka Ciraaq ayaa billaabay duulaan ay dib ugu qabsanayaan magaalada Tal Cafar oo ka mid ah deegaannada kooban ee ay hadda dalkaasi kaga sugan yihiin xooggaga ururka isku magacaabay dowladda Islaamka.
Sidee looga kaaftoomi karaa gargaarka bini'aadamnimo?